Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo lasoo Wareegeysa Pau Torres, go’anka Declan Rice iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo lasoo Wareegeysa Pau Torres, go’anka Declan Rice...
Wararka Suuqa Maanta: Chelsea oo lasoo Wareegeysa Pau Torres, go’anka Declan Rice iyo Qodobo kale
Arsenal ayaa u soo bandhigi doonta Sevilla weeraryahanka reer France Alexandre Lacazette, oo 30 jir ah, si ay qeyb uga noqoto heshiiska ay kula soo saxiixaneyso 25 jirka reer Morocco Youssef En-Nesyri. (La Razon)
Leeds United ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah la furtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Kalvin Phillips si ay uga soo horjeestaan ku biirista xidigan 25 jirkaan kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United. (DailyStar)
Tottenham ayaa xiiseyneysa goolhayaha England Sam Johnstone oo 28 jir ah (Football Insider)
ISpurs ayaa sidoo kale sheegeysa in ay diyaar u tahay tagitaanka ciyaaryahanka khadka dhexe ee Harry marka January furmo suuqa kala iibsiga noqon. (Caughtoffside)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona iyo Netherlands Frenkie de Jong, oo 24 jir ah, ayaa sheegay inuusan rumeysneyn in ceyrinta tababarihii Ronald Koeman “ay wax walba ku xallin karto” kooxda reer Spain ee dhibban. (Goal)
Chelsea ayaa ka fiirsaneysa inay kooxda keento daafaca Villarreal Pau Torres, oo 24 -jir ah. Manchester United ayaa sidoo kale xiiseyneysay xiddiga reer Spain. (90min)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer England Declan Rice ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay West Ham isla markaana uu ka gaari karo ujeeddooyinkiisa kooxda. 22 jirkaan ayaa lala xiriirinayay kooxaha Chelsea iyo Manchester United. (Sky Sports)
Inter Milan aan xiiso u qabta saxiixa Arsenal iyo goolhayaha Germany Bernd Leno, 29 jir ah. Kooxda Serie A ayaa dooneyaa 25-sano jirka reer Cameroon Andre Onana . (Fabrizio Romano)
Leno ayaa aaminsan in sababaha dhawaan looga reebay safka hore ee Gunners aysan la xiriirin raadinta inuu ka dhaqaaqo bisha Janaayo. (Mirror)
Daafaca dhexe ee Faransiiska Jules Kounde ayaa sheegay inuu diirada saarayo Sevilla ka dib markii Chelsea ay ku guuldareysatay dalabkii 22 jirkaan. (DailyStar)
Madaxweynaha Fiorentina Rocco Commisso ayaa sheegay in kooxdu ay ku dhibtooneyso inay ku qanciso Arsenal iyo Chelsea bartilmaameedka Dusan Vlahovic inuu saxiixo qandaraas cusub. Weeraryahanka reer Serbia oo 21 jir ah ayaa dhaliyay 21 gool oo Serie A ah xilli ciyaareedkii hore. (Express)
Everton ayaa isha ku heysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Roma Gonzalo Villar maadaama 23 jirka reer Spain uusan u muuqan mid ku jira qorshaha tababare Jose Mourinho ee kooxda. (Fichajes)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa qirtay in ciyaaryahanka khadka dhexe ee weerarka uga ciyaara Ingariiska Jesse Lingard, oo 28 jir ah, uusan ku faraxsaneyn kooxda sababtoo ah waqti la’aan uu ku ciyaaro. (Metro)
Weeraryahanka reer Talyaani Lorenzo Insigne ayaa yiri “waxaa la joogaa waqtigii laga wada hadli lahaa” qandaraaska cusub ee Napoli, inkasta oo 30 jirkaan uu haatan heshiis kula jiro kooxda Serie A ka dhisan xagaaga dambe. (Dailymail)
Daafaca Talyaaniga Leonardo Bonucci, oo 34 jir ah, ayaa sheegay inuu ku dhowaaday inuu ku biiro Manchester City sannadkii 2016, sidoo kale wuxuu la hadlay tababaraha kooxda Etihad, Pep Guardiola, sannadkii hore laakiin wuxuu doortay inuu sii joogo Juventus. (Goal)
Previous articleSarkaal ka tirsan Puntland oo lagu dilay Garoowe – Yaa ka dambeeyey?
Next articleDoorashada Somaliland ee Aqalka Sare oo la soo gaba-gabeeyey – Yaa ku soo baxay?
Pep Guardiola ayaa qirtay in aan la xakameyn karin Lionel Messi ciyaarta ka dib markii Macalinka uu la hadlay warbaahinta. Xiddiga lixda jeer ku...
Arsenal oo dooneysa Calvert-Lewin, Watkins si ay ugu bedesho Lacazette